Nin Lagu Seexdow ha Seexan, Sax Baad Diidaye ha Seexan – Rasaasa News
Jun 13, 2009 Jwxo-shiil, Jwxo-shiilada, Jwxo-shiilo, Sudhayo
Doqontu xanuunka uun bay wax ku garataa, ee maba taqaano Qaraabo iyo Xigaal midna, waana sidaas sida ay ku dareemi xanuunka ay gaysanayso.
Waxaa muddo siddeed bilood ah meel laggaga soo kaadiyo la waayey Kooxda Sudhayo, oo iyadu jidaysa in boggaga Internetka ay ku af lagaadeeyaan dadweynaha iyo masuuliyiinta sharafta badan oo ka mid ah beelaha Somalida Ogadeeniya.
Kooxdan Sudhayo oo aan iyagu lahayn aragti dheer balse uun garta wax indhahooda hortooda ka muuqda, ayaa waxaa ay caan ku yihiin Qabyaalada iyo cuqdada aan la garanaynin meel ay kala yimaadeen. Cuqdadaas ayaa waxay kula beegsadeen dadweynaha sharafta leh iyaga oo shakhsi shakhsi u af lagaadaynaya dhamaan xubnaha beesha, waxayna markii dambe bilaabeen in beesha ugu yeedhaan in ay tahay beel ka soo horjeeda danaha dadweynaha arimahaas oo ay damceen in ay ka dhaadhiciyaan xitaa kuwa liita oo beesha ka midka. Waxaa dhab kolka aad doonayso in aad qoomiyada wax yeelo u gaysato, waxaad adeegsan inteeda liidata [minors].
Kolba hadii la garanayo kooxda Sudhayo wax ku kalifay af lagaadada in ay tahay oo kaliya Qabyaalada ku gaamurtay lafahooda [genetic], ayaa waxaa la is odhan karaa kolba hadii aan wax lagu samaynin muxuu waxani u galay dhiigooda. “Caaqil Absame ahaa ayaa waxay waydiiyeen qabiilooyin ka mid ah qabiilooyinka badan ee uu ka kooban yahay beelaha Absame, Hebelow waxaanu rabnaa in aad beeshaada ka keento waxa aan yeelay ee ay colka noola yihiin, madaama ayna jirin wax na dhex maray, kolkaas ayuu qoslay oo yidhi ma doonaysaan in aan idin jeclaano, markaas ayaa la yidhi haa, wuxuu yidhi haadaad kalgacal naga rabtaan waa in aad anaga nala ekaataan tiro ahaan,” arintaas oo ah mid uu Ilaahayga Qaadiru raxmaanka ahi masuuliyadeedda lee yahay oo aan Aadamuhu waxba ka qaban karin.
Kolba, hadii uu hadalku sidaas yahay oo ayna dawo lahayn kooxda Sudhayo, waxaa go,aan lagu gaadhay in sida ay wax u qoraan loola qoro. Waxaana muddo gaaban ka hor la furay website-ka rasaas.com waxaana loogu qoray wixii ay qorayeen wax la mid ah.
Hadaba maxaa dhacay kolkii loo jawaabay, way adkaysan waayeen, waxay bilaabeen in ay Oohin kula soo noqdaan dadkii ay caayayeen, waxay bilaabeen in ay meelaha dhahaan maxaa nalaga rabaa waxba ma aanaan samaynine. Kolkii dhag loo dhigi waayey ayaa waxay bilaabeen in ay Dhalinyarada beesha isku dayaan in ay u caga jugleeyaan iyaga oo leh waan idin dacwaynaynaa, waalidkiin ayaan idiin sheegaynaa waayo waxaad furteen boggag Internet ah oo nalagu caayo, waayaabe sow iyaga ma ahayn kuwa cayda dadka ka daaya laga waayey.
Waxaa la sheegayaa in Sheekeeye oo aanu sheekadadiisa kol dhaw soo daabici doono iyo Mr Garaabo ay jiifka qaban la, yihiin [nightmare], waxayna ku dhax wareegayaan bulshadii ay shalay af lagaadaynayeen iyaga oo ku andacoonaya waxaanu nahay qaraabo oo waa nala dhalay oo gabdho ayaanu qabnaa, waa ila yaabe Qaraabada ay maanta garwaaqsadeen shalay xagee bay jirtay.
Waxaan wax la qarinayo ahayn in kooxda Sudhayo uu ka faa,iidaystay Jwxo-shiil, ayna maanta la qaybsanayaan dunuubtii uu ummada Ogadeeniya ka galay, waa hubaal in ayna hore uga galin ummada, maantase waxaa ay kula jiraan dambiyada uu kula dhuumanayo meesha aan wali la ogayn.
Sudhayo, waa in ay ogaataa sida looga takooray bulshada Somalida Ogadeeniya ee North America in ay uga takooran yihiin ummada Somalida Ogadeeniya meel kasta oo ay tagaan. Waxaa kale oo aan u sheegaynaa in ayna halganka been ka sheegin, way og yihiin xaalada uu maanta ku sugan yahay iyo cida dambiga ka gashay, hadii ayna ogayna ha iska daayaan garaabada si ay u ogaadaan xaqiiqada jirta.
Xogg gaaban oo aan idiinka hayno Ina Maryama Agan oo iskaga soo cararay Eritariya kolkii uu u adkaysan waayey afar nin oo Jwxo-shiilo ah oo al joogay Eritariya, waxaana uu soo galay isaga oo toobad keen ah dalka Finland oo ay hore Caruurtiisu u daganaayeen. Wuxuuna noo sheegay in uusan is casilaynin oo uu horeba Jwxo-shiil ugu sheegay in laga badalay Eritariya, balse uun uu iska aamusi sida saaxiibadiisa amakaagsan ee iska Jooga dalalka reer Galbeedka.
Ugu dabayn waxaan idiinka digaynaa xubnaha aan kor ku xusnayoow, in aydaan xidhiidh dambe la samaynin bulshada aad caydeen ee idinka war haysa, ogaadana walee waxaad gaysateen guryihiina ayey maanta dhex gashay.
Waxaad maanta ku sugan tihiin maahmaahdii Soomaaliyeed ee ahayd ama afeef hore lahow ama adkaysi dambe lahow, waa in aad adkaysi u yeelataan wax aad galabsateen.
Ethiopian troops cross deeper into Somalia